Seedorf oo hal arrin oo aan isaga u suurtagelin ku coowryay Gattuso – Gool FM
(A Coruña) 06 Abriil 2018 – Clarence Seedorf ayaa rumaysan in ‘degganaanta’ heerka naadi ay tahay midda Gennaro Gattuso u sahashey inuu waqtigiisii mid ka badan sii joogo Milan oo uu qandaraas dheer oo 3 sano ah shalay u saxiixay.
Seedorf ayaa AC Milan kusoo laabtay Janaayo 2014 balse waa la eryey kaddib 5 bilood, waxaana waqtigiisa naafeeyay kooxda oo kaash la’aan ahayd iyo ka hadalka iibka kooxda oo marka wadaxaajoodkeedu socdey.
“Waxaan qabaa in uu jiro farqi wayn oo inoo dhexeeya aniga iyo Gattuso waana naadiga,” ayuu ninkan Dutch-ka ihi u sheegay Fox Sports.
“Degganaani ma jirin markii aan halkaa joogey. Waxaan eersaday waxyaabo aan kubadba shuqul ku lahayn. Waxaa jirey jahawareer soconayay tan iyo markii kooxda la iibiyay, waana ka xumahay inaanan halkaa ku raagin, waloow aynaan natiijo xumayn.” ayuu raaciyay Seedorf oo 35 shaqeeyay 19 kulan.
“Waan ku faraxsanahay inuu Gattuso helay jawi deggan, waana farqiga jira.” ayuu ku dooday.
Haddii ii Ronaldo Koox ahaan lahaa wuxuu kaalinta 10-aad ka soo gali lahaa....